चिसोमा अहिलेसम्मकै बोल्ड अवतारमा धमला पत्नी एलिजा, हेराैँ तस्बिर - chiyagaff
चिसोमा अहिलेसम्मकै बोल्ड अवतारमा धमला पत्नी एलिजा, हेराैँ तस्बिर
पुस ५, २०७८ पुस ५, २०७८ Chiya GaffLeaveaComment on चिसोमा अहिलेसम्मकै बोल्ड अवतारमा धमला पत्नी एलिजा, हेराैँ तस्बिर
चर्चित पत्रकार ऋषी धमला पत्नी एलिजा गौतम चलचित्र अनुरागबाट नेपाली फिल्ममा डेब्यु गरिन् । धमला दम्पती आफैले निर्माण गरेको उक्त फिल्म चल्न सकेन तर एलिजको चर्चा भने राम्रै भयो ।
१८ वर्षको कलिलो उमेरमा उनले आफूभन्दा १७ वर्ष जेठा व्यक्तिसँग लगनगाँठो कसिन् । त्यसपछि उनी रंगिन दुनियाँमा कस्सिएर लागेकी छन् । फिल्ममा जम्न नसकेपनि म्युजिक भिडियामा भने उनको माग निकै छ ।
जहा उनी निकै सुन्दर देखिएकी छिन् । सन्तान जन्माएपछी पनि आफ्नो फ़िटनेसमा ध्यान राख्दै अभिनय र समाजसेवाको यात्रामा निरन्तर पाईला चाल्ने नारीको रुपमा उनको चर्चा हुने गर्दछ ।
त्यस्तै उनी हाल क्यानडा पुगेर फर्कीएकी छन् । फर्किए लगत्तै उनले नयाँ कार खरिद गरेकी छन् । उनले ५० लाखमा टाटाको नेक्सन कार किनेकी छन् । उनले सामाजकि संजालमा पनि केहि तस्बिर साझा गरेकी छन् । जहाँ उनी कारसँगै खिचिएका तस्बिरले राम्रो राम्रो चर्चा पाएका छन् ।
त्यस्तै पछिल्लो समय उनी अहिलेसम्म्कै बल्ड अवतारमा देखिएकी छन् । उनले नयाँ फिल्म घुइँचो मा साइन गरेपछि उक्त फिल्मको कार्यक्रममा उनी निकै बोल्ड बनेकी हुन् । तस्बिरमा उनि खुलेको देखेर सामाजिक संजालमा ट्रोल नै बनेकी छन् ।
कुवेतमा अब यस्ता घरेलु कामदारको भिसा स्वत: रद्द हुने
यी ४ भारतीय कलाकार जाे नेपाल भनेपछि मरिहत्ते गर्छन !
जेष्ठ १७, २०७८ जेष्ठ १७, २०७८ Chiya Gaff
सबैभन्दा धेरै पढ्ने नेपाली ८ कलाकारहरु,कस्को पढाइ कति पढ्नुहोस !
जेष्ठ ५, २०७८ जेष्ठ ५, २०७८ Chiya Gaff
यस्ती भइन् ‘बजरंगी भाइजान’की ‘मुन्नी’ हेर्नुस् फोटोहरु…
जेष्ठ २५, २०७८ जेष्ठ २५, २०७८ Chiya Gaff